Intertainment – Dainiksamchar
October 13, 2020 admin 8344
लक्ष्मी खुशी पार्न यसरी गर्नुस् पुजा, हुनेछ धन’को बर्षा ,
October 13, 2020 admin 3133
हिन्दु धर्ममा लक्ष्मीलाई धनकी देवी भनिन्छ । सौभाग्य, समृद्धि, सफलता, सम्पन्नता र सुन्दरताको अर्थमा पनि लक्ष्मी शब्द प्रयुक्त हुने गर्दछ। लक्ष्मीको पुजा गरे धनी भइने जनविश्वास रहेको छ । यहाँ लक्ष्मीलाई खुसी पार्ने ७ तरिकाहरु
यी हुन माता लक्ष्मीका ८ रुप, जान्नुहोस् कस्को पुजा गर्दा कस्तो फल प्राप्त
October 13, 2020 admin 3098
काठमाडौँ । विद्याका लागि सरस्वतीको पूजा गरेजस्तै धनका लागि लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ । कालरात्रीमा त लक्ष्मीको झन विशेष पूजा गरिन्छ । यो मान्यता रहेका छ कि देवी लक्ष्मीको पूजा गर्नाले घरमा धन सम्पत्ति भित्रिन्छ ।
October 13, 2020 admin 3073
वास्तुशास्त्र अनुसार केही यस्ता चिज छन्, जुन तपाईले सधै पर्समा राख्नुभयो भने पैसाको कमी हटेर जान्छ। पैसा हातमा नटिक्ने धेरैको समस्या हुन्छ। यस्ता केही चिज छन्, जुन चिस पर्समा राख्दा पैसाको समस्या हटेर जान्छ। लक्ष्मी
October 13, 2020 admin 3442
सुख र दुःख आउँछ जान्छ । त्यसैले भन्छन नि कुनै पनि मानिस कहिल्यै पनि सुखी वा दुखी भईराख्दैन । यसै प्रसंगलाई लिएर महाभारतमा पनि विदुरले भनेका छन्, यदी कुनै मासिनको जीवनमा यी ६ कुराहरु प्राप्त
October 12, 2020 admin 1340
निर्मला जोशी हेल्थ पोष्टको नेतृत्व गर्ने गरी बैतडीको डिलासैनी— ५ पुगेकी थिइन् । त्यतिबेला उनी केवल २१ वर्षकी मात्रै थिइन् । भर्खरै लोकसेवा पास गरेर स्थायी भएकी उनले त्यसअघि केही महिना स्वास्थ्य चौकीमा बिरामी उपचारको
October 12, 2020 admin 769
कुखुराको मासु पछिल्लो तीन वर्ष यताकै सस्तो भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । एक महिनामा तीन पटक मूल्य घट्दा पनि मासु नबिकेपछि प्रतिकिलो तयारी मासुको मूल्य दुई सय रुपैयाँबाट पनि तल झरेको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी
October 12, 2020 admin 754
एजेन्सी । हिजोआज सम्बन्धहरु नाजुक बन्दै गइरहेका छन् । प्रविधि र विज्ञानको विकासले मानिसलाई अनावश्यक आवश्यकता र तनावतिर डोर्याइरहेको छ । मानिसहरु के कारणले सम्बन्धमा दरार आउँदै छ भन्ने कुरातर्फ कहिल्यै ध्यान दिदैँनन् तर सम्बन्ध
October 11, 2020 admin 844
काठमाडौँ । आचार्य चाणक्य नीतिमा मानव समाजसँग सम्बन्धित हरेक समस्याको समाधान भेटिन्छ। अहिलेको वर्तमान परिस्थीतिसँग पनि चाणक्य नीति मेल खान्छ। यदि कुनै व्यक्ति जीवनमा चाणक्य नीतिको पालना गर्छ भने सफलता हासिल गर्न सक्छ। चाणक्य नीतिका
October 11, 2020 admin 939
काठमाडौं : विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण समाप्त होस् भन्ने कामनासहित पशुप तिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजा गरिएको छ । नयाँ वर्षको अवसरमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाले विश्वका सबै मानिस
LEX 18 agenda conversation: Job club (121737)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (113641)
Hello world! (113314)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (112072)